Nyowani kubva kuMendoza naPérez-Reverte kushuvira matsutso. | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Noticias, Novela, Nhema nhema
Ehe, isu tiri mukati julio, yakazara mwedzi wezhizha, zororo, mahombekombe, kupisa uye zororo. Kwandiri, uyo anosema kupisa, mwedzi weherohero kunyangwe iri iyo yandiona ndichizvarwa nhasi ... mashoma. Saka ndave kutofunga nezvake matsutso. Uye ndezvekuti munaGunyana naGumiguru, kune zvirongwa, zvakanyanya nhauAya maviri kubva kune akati wandei ma greats (uye vandinoda vanyori) kubva kune yenyika zvinyorwa zvinyorwa, Eduardo Mendoza naArturo Pérez-Reverte. Ini ndinotarisa nekukurumidza Mambo anogamuchira y Sabotage, chechitatu chemazita ezvinoumba nhema dzaFalcó.
Mambo anogamuchira, rakanyorwa naEduardo Mendoza
El Cervantes Mubayiro ChiCatalan 2016 Eduardo Mendoza muchengeti wemufananidzo inodhinda bhuku idzva richarova pazvitoro zvemabhuku pa September 4. Zvakare naSeix Barral, Mambo anogamuchira inotitora kuenda kuBarcelona ye 1968, uko protagonist, Rufus Hondo, anogamuchira komisheni yake yekutanga se nib mupepanhau. Commission iyo yakakosha kwazvo, iyo ye kufukidza muchato wemuchinda mukutapwa nemusikana mudiki akanaka kubva kunzanga yepamusoro.
Asi nekuda kwekumwe kusangana, Batalla anoshamwaridzana nemuchinda, uyo pakati pezvimwe zvinhu anomubvunza kuti anyore iyo Chronicle yaro chaiyo nhoroondo. Nguva inodzvinyirira yeESpain kubva kunopera makumi matanhatu achasarudza Rufo kuenda ku New York Hauna mari, asi une tarisiro yakakura yekubudirira kuitira kuti uite chimwe chinhu chinonakidza noupenyu hwako.
Tinogona zvirokwazvo kuwana iyo chiitiko chemunyori nezve makore iwayo uye ruzivo rwake rweUnited States mushure mehunyanzvi hwebasa ipapo. Uye saka kune mareferenzi kune iyo kuenzana kwemarudzi, the hippy kufamba kana the feminismpamwe ne ngochani kufamba kana mafomu matsva ekutaura kwetsika.
Sabotage, rakanyorwa naArturo Pérez-Reverte
Nebhuku rayo rakarongerwa iyo 3 yeOctober, uye zvakare yakarongedzwa pakati penhau nhema, iyo yenhoroondo uye inonakidza, inouya iyo chetatu yezvikamu zvakatanga ne Falco ndokuteverwa Eva. Munyori weCagagenagena, wandakave zvakare nemufaro wekukwazisana kwekupedzisira Madrid Book Fair, anofadza vateveri vazhinji vega. Lorenzo Falco nemusoro mutsva uyu.
Parizvino pane zvishoma nezve nharo yake. Isu tinongoziva, kanawo, isu hatizive chii chiri kuitwa naFalcó muParis muchirimo cha1937 uye kune zvakare mubvunzo pamusoro pe chokwadi che Guernica, mufananidzo uyo Picasso wakadhirowewa. Saka zvekare iyo kunyengera uye pamwe pachave nekumonyoroka uye kutendeuka, njodzi nezviitiko zvinopfuura rima mune izvi mumiriri / mutikitivha / musori mumakore iwayo ekutambudzika.
Pérez-Reverte ari kuzopedzisa rakakura gore rekunyora kwaanotopenya naro Imbwa dzakaomarara hadzitambe, zita randinogara naro kure pasina kupokana. Akateedzana naFalcó haasati apedza kundigutsa, asi sezvo maitiro ake agara achidaro, ndichaverenga izvi Sabotage.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Iyo nyowani kubva kuMendoza naPérez-Reverte kushuvira matsutso.
Chii chawaizoita dai iwe uine mwedzi miviri yekugara? Kubvunzana naSantiago Díaz, munyori weTalión